E-commerce nzvimbo dzinotonga pamusika wepamhepo | ECommerce nhau
E-commerce nzvimbo dzinotonga pamusika wepamhepo
Nekufambira mberi uku munyika ye internet, nzvimbo dzakasiyana siyana dzakagadzirwa dzinotonga pamusika wepamhepo, nzvimbo idzi dzinotengesa zvinhu zvinodarika zviuru gumi pazuva, zvichivaita kambani hombe mumusika wepasirese wepasi, vachirova misika yechinyakare vane chiyero chekutengesa. zvakaderera zvakanyanya kupfuura izvi. Tevere, isu tinokuudza iwe kuti chii chiri nzvimbo dzinozivikanwa kwazvo mukutenga pamhepo.
3 Bhuruu Nile
Zvichida saiti inonyanya kuzivikanwa maererano nekutenga nekutengesa, kambani iyi yakavambwa muna 1995 uye yakave nebudiriro huru zvekuti kubva 2002 kusvika 2015 vakava varidzi vekambani hombe yepasirose yekubhadhara system kubva kuUnited States, Paypal. Ebay haingopa chete nzvimbo yaunogona kutenga nekutengesa zvinhu uye zvigadzirwa, zvakare inokupa iwe mukana wekukwanisa kushambadzira zvigadzirwa zvako, uko vamwe vashandisi vanopa dzakasiyana mari, uye umo mushandisi ane yakakwira kupihwa kupihwa achatora. chigadzirwa mukati menguva yakati yenguva.
Iyo saiti ine huwandu hukuru hwekutengesa pasi rose, ine huwandu hwekutengesa huri padyo nemamirioni zviuru makumi mashanu emadhora, saiti ino ine nzvimbo yekutanga munzvimbo dzeE-commerce munzvimbo. Amazon yakavambwa muna Chikunguru 50,000, 6 muguta reSeattle, Washington, United States. Iine vashandi vanosvika zana nemakumi mashanu ezviuru, zviri pachena kuti ndiyo inonyanya kukosha kutenga nekutengesa kambani pasi rose.
Yakavambwa muna1999, ndiyo saiti yakakura kwazvo yepamhepo padandemutande maererano nemadhaimani uye zvishongo, ino saiti yepamhepo inokwikwidzana nezvitoro zvechigadzirwa zvakaita seTiffany & Co, uyezve inokwikwidza nezvitoro zvepamhepo zvakaita seBelgium Diamonds neRingsberry .com. Iine sosi yemari inosvika $ 473 mamirioni uye ine vashandi vevashandi mazana matatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » E-commerce nzvimbo dzinotonga pamusika wepamhepo
Matipi ekuchengetedza chengetedzo yako paE-commerce saiti
Ndezvipi zvinhu zvandinogona kutengesa pamhepo?